ကိုကြီးမှ ညီလေးသို့ ပေးစာ | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် ကိုကြီးမှ ညီလေးသို့ ပေးစာ
အရွယ်ရောက်တော့မယ့် ညီလေးထံသို့ ချစ်ကိုကြီးမှ ပေးစာ။ ညီလေးရေ ....
ဒီနေ့က မင်းအသက် ၁၈ နှစ် တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ဆိုတော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကိုကြီးက မင်းကို Happy Birthday ဆိုပြီး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ချင်တယ်ကွာ! ငါ့ညီက ခုဆို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်နေပြီ… ကျောင်းမှာလဲ သွက်သွက်လက်လက် ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ ပညာရှာတာကို သိရတော့ ငါ့ညီရဲ့ အစ်ကို ဖြစ်ရတာ နည်းနည်းတောင် ဘဝင်မြင့်ချင်သလိုလိုပဲကွာ! ဒါပေမယ့်လဲ ငါ့ညီ သိထားဖို့က အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ဆိုတာက ကလေးလဲ မဟုတ် လူကြီးလဲ မဟုတ် ဇကောဇက အရွယ်မလား? ဒီတော့ အစ်ကိုကြီး အဖအရာအနေနဲ့ ငါ့ညီလေး ရှေ့လျှောက် ဖြတ်သန်းရမယ့် ဘဝခရီးလမ်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကိုကြီး မှာချင်တာလေးတွေတော့ အများသားကွ!
အဓိကကတော့ ပညာရေးပေါ့ကွာ… ပညာလေ့လာတဲ့နေရာမှာ ဘွဲ့တစ်ခုရဖို့ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို အားစိုက်ပြီး ကြိုးစားတာတော့ ကြိုးစားပါ။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်က ၂၁ ရာစု အင်တာနက်ခေတ်ဆိုတော့ မင်းဘဝရှေ့ရေးအတွက် ကျောင်းစာတစ်ခုတည်း အာရုံစိုက်ရုံနဲ့ မရတော့ဘူး။ ခုခေတ်မှာ ငါ့ညီတို့လို အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၂၈ နှစ်ကြား လူငယ်တွေ အများနဲ့အတူ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် စာများများဖတ်တာ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ၊ ဘာသာစကားတွေကိုလဲ အချိန်တစ်ခုထားပြီး လေ့လာစေချင်တယ်ကွာ!
နောက်တစ်ခုကတော့ အပျော်အပါးနဲ့ ပက်သက်လို့ပေါ့ကွာ…. လူငယ်ပီပီ အပေါင်းအသင်းနဲ့ ပျော်ချင် ပါးချင်တာကို လက်ခံပေမယ့် အပျော်ကနေ အပျက်ဖြစ်သွားရင်တော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘဝပျက်တတ်တယ် ငါ့ညီ! ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနေ အသက် ၃၀ မတိုင်ခင်မှာ သာမန်လုပ်နေကြ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဝိုင်းထိုင်တာ၊ ဘားသွားတာလောက်က ရှော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပေမယ့် ဒါတွေကို အလွန်အကြူးလုပ်ပြီး မူးယစ်ရမ်းကားမယ်၊ ပြဿနာတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ မင်းဘဝမှာ အမည်းစက် ထင်သွားလိမ့်မယ် ညီလေး! လူတိုင်းအမှားမကင်းဘူးဆိုပေမယ့် ကိုကြီးက ငါ့ညီကို အမှားများတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်တော့ မဖြစ်စေချင်ဘူးကွာ! ကိုကြီးတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက မှားခဲ့တာတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြောပြရင်းနဲ့ ညီလေးဘဝမှာ ထပ်တူညီတဲ့ အမှားမျိုး မမှားစေချင်တဲ့ သဘောပါပဲ။
နောက်တစ်ခုမှာချင်တာက လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ ကိစ္စပေါ့ကွာ! အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ငါ့ညီရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လှတပတမိန်းကလေးတွေ၊ စိတ်နေသဘောထား မျိုးစုံရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ မှာချင်တာက ငါ့ညီအနေနဲ့ “ ငါယောကျာ်းလေးပဲကွာ! ဘာမှ နာစရာ မရှိဘူး” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ ကျောရရုံ ကြံတာတွေ၊ အပျင်းပြေ ရရင် ပြီးရော သဘောမျိုးနဲ့ မိန်းကလေးတွေိကို သဘောမထားစေချင်ဘူးကွာ! ဒီလို ကျောရရုံ ကြံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ တဖက်သား မိန်းကလေးရဲ့ အချစ်ကို ပြီးပြီးရော အလွဲသုံးစားလုပ်တာဖြစ်ဖြစ် အဆုံးစွန်ထိ ပြောရရင် လူငယ်ပီပီ စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ ဟိုတယ်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေလဲ ပါချင်ပါမှာပေါ့! သိထားဖို့က ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ တန်ဖိုးကြီးတယ် ငါ့ညီ! ငါ့ညီတို့လို ဟိုမရောက် ဒီမရောက် အရွယ်တွေမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုတာ လိင်ကိစ္စ နဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးမကျဘူးဆိုတာ သိစေချင်တယ်ကွာ! အချစ်ဆိုတာက ဘဝတစ်ခု မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့ကွာ!
ကဲ ကိုကြီးရဲ့ စာလဲ ရှည်လောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့ကွာ! ဒီတော့ ငါ့ညီအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးရင်းနဲ့ ပဲ အဆုံးသတ်ပေးချင်တယ်ကွာ… ငါ့ညီရဲ့ ဘဝမှာ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကစလို့ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် အများအကျိုး၊ မိသားစု အကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ ယောကျာ်းကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပါစေကွာ…